Mpanakorontana manampy trotraka | NewsMada
Mpanakorontana manampy trotraka
Fotoan-tsarotra izao, tsy i Madagasikara ihany fa izao tontolo izao. Tsy inona fa ny amin’ity hoe fihanaky ny valanaretina Conoravirus. Ho tonga hatraiza? Soa ihany, mbola tsy tonga eto Madagasikara… Na izany aza, mila mailo sy misoroka mialoha fa efa hoe mihaodihaody manodidina any.
Tena ara-bakiteny ny hoe: aleo misoroka toy izay mitsabo. Mbola mifamahofaho tsinona ny fahazoana antoka ny fitsaboana tanteraka io valanaretina io na tsia. Toy izany koa ny amin’ny vaksiny fanefitra. Ny aza voany ihany? Na misoroka izay azo sorohina aloha… Izany ny atrehina eto amin’izao.
Amin’izany, mahavalalanina sy mahafanina ny fisian’ny sahy manely tsaho ankitsirano izao. Minia manakorontana, mamendrofendro, manararaotra amin’ny fampiakarana vidin-javatra, ohatra, manafina na manangona entana. Misy aza no toa faly amin’ny tsy fahalalana sy ny fahavoazan’ny hafa fotsiny izao.
Fiteny mandrakariva ny hoe tsy misy mahita tombontsoa amin’ny korontana eto an-toerana. Nefa misy ny matady tombontsoa manokana amin’ny fisian’ny korontana, tsy fahalalana, fahavoazana… Antony politika? Na fanakiviana ny vahoaka hiraviravy tanana amin’izao hoe tsy mahomby, ohatra, ny fitondrana.
Raha sanatria, aza misy anie izany, ka tonga tokoa ny tokoa amin’izany hoe mihaodihaody izany: hahay hanavaka ny mpitondra sy ny mpanohitra ve ny valanaretina… tsy mifidy hasiana? Na hamaha ny olana toy ny fisorohana sy ny fanafana ny aretina ny politika ranofotsiny mahadotra ny sasany amin’izao…
Hatramin’ny areti-mandoza mampivarahontsana an’izao tontolo izao avy ve, rey olona, no ndeha hanaovana kilalao maloto noho ny fitiavan-tena amin’ny politika? Na sangy ratsy fotsiny izao ao anatin’ny fahasahiranan’ny hafa noho ny toetra amam-pomba maharikoriko tafahoatra fa tsy inona…
Amin’ny fotoan-tsarotra toy izao no tena isehoan’ny maha izy azy ny tsirairay? Nefa tokony hifamenoana amin’izany koa fa tsy samy maka ho azy. Mba iombonana ny ady atrehina fa tsy ho ady manokana manampy trotraka indray ny fisian’ny mpanakorontana, mamendrofendro…